Maitiro ekugadzirisa yako Apple TV kure | Yakafananidzwa | Ndinobva mac
Yakafananidzwa | | Apple TV, Tutorials
Ndiyo remote control kana Apple Remote yako Apple TV kusashanda kana kusapindura sezvazvinofanira? Nhasi tichaona mamwe matanho kuitira kuti iwe ugone kugadzirisa dambudziko iri uye kuramba uchinakidzwa neApple TV yako mumba yekutandarira kana, seni, ndakarara pamubhedha 😉
Dzosera Apple yako kure kure
Mazuva mashoma apfuura kutonga kwangu kure Apple TV, iyo aluminium imwe, yakamira kushanda, saizvozvo pakarepo. Kana ichimanikidzwa, chinongedzo chakatungamirwa chaibwaira katatu chena, asi hapana kana chinhu, iCacharro yakaramba kuita, saka ndakadzika kuzoshanda ndisati ndaenda ku Murcia Apple Chitoro Kana bodo.
Ndiri kuenda kufuratira iwo mazano, zvimwe zvisina musoro, zverudzi «ita shuwa kuti iwe unonamira zvakanaka pa Apple TV»Uye ngatisvike pamwoyo wenyaya yacho.
Chekutanga pane zvese, mhinduro idzi dzatichaona ndedzekuti riinhi iwo murairo inoshanda, kureva kuti, inoburitsa chiratidzo, asi iyo Apple TV hazviite, ndiko kuti, kana ikasaburitsa chiratidzo, zvirinani kutanga nekuchinja bhatiri usati waita chimwe chinhu.
Kutanga, edza batanidza mutungamiriri zvakare, pamwe chinongedzo chakarasika nekuda kwechimwe chikonzero. Zviite sezvakatsanangurwa kwatiri muApple technical rutsigiro:
Pane aluminium Apple Remote, pinda uye bata Menyu uye Kurudyi mabhatani kwemasekondi matanhatu.
Mune mavhezheni ekare ewhite Apple Remote, tinya uye ubatise bhatani reMenu uye Rinotevera / Rinokurumidza Mberi kwemasekonzi matanhatu.
Iwe unogona zvakare kutevera aya matanho uchishandisa Remote app kubva kune yako iPhone, iPad kana iPod touch:
Sarudza Zvirongwa> Zvakajairika> Remotes kubva kumenyu huru yeiyo Apple TV.
Sarudza Pair Apple Remote.
Paunenge wabudirira pairi iyo Apple Remote, iyo Apple TV icharatidza chakabatana chinongedzo chiratidzo (
) pamusoro peiyo remote control icon. Paunenge wabatanidzwa, iyo Apple TV iyo inongogamuchira yakajairwa chinangwa mirairo kubva kune yakabatana mutongi
Kana izvi zvikasashanda uye remote yako ichiri mumamiriro akafanana sepakutanga, zvingangoita kuti chiratidzo chayambuka neimwe nzvimbo iri kure yakatenderedza imba, ndizvo zvakaitika kwandiri. Saka mhinduro irimo bvisa chinongedzo kubva kuApple Remote. Iwe unogona kuita izvi kubva kune imwecheteyo kutonga iyo «isingashande», iyo inoita kuti iwe ubheneke katatu muchena Apple TV asi hapana zvimwe zvainoita. Zvekare, isu tinoteedzera rairo iyo Apple inotitaurira pane yayo technical technical peji:
Pane aluminium Apple Remote, pinda uye bata Menyu uye Kuruboshwe mabhatani kwemasekondi matanhatu.
Mune mavhezheni ekare ewhite Apple Remote, tinya uye ubatise Menyu uye Yepamberi / Yekumashure mabhatani kwemasekondi matanhatu.
Iwe unogona zvakare kutevera aya matanho:
Sarudza Unlink neApple Remote.
Paunenge wabudirira kubvisa chinongedzo kubva kumutungamiriri, iyo Apple TV icharatidza chakasiyana chinongedzo chiratidzo (
) pamusoro peiyo remote control icon mune yekumusoro kuruboshwe kwescreen yako.
Panguva ino yangu yekure yaive ichishanda zvakakwana asi, kana zvisiri kwauri hazvisi izvo, uchafanirwa kubatanidza yako Apple Remote neako Apple TV. Kuti uite izvi, tevedzera rairo dzatakaona kare.
Ndinovimba hunyengeri uhwu hwakakubatsira uye iwe une rairo yako inoshanda zvizere zvakare. Kana iwe waifarira iyi posvo, usapotsa mamwe akawanda matipi, matipi uye tutorials muchikamu chedu Tutorials. Uye kana uine kusahadzika, mukati Yakafananidzwa Mibvunzo Unogona kubvunza mibvunzo yese yauinayo uye zvakare batsira vamwe vashandisi kujekesa kusahadzika kwavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Maitiro ekugadzirisa yako Apple TV kure
Kutenda nemazano, anobatsira kwazvo uye ndakagadzirisa dambudziko rangu remota
Norma Gonzalez akadaro
Remote control yangu inoshanda asi museve wepamusoro haupindure, saka handikwanise kufamba pane yangu apple tv. Miseve yepasi chete, yekurudyi uye yekuruboshwe ndiyo inoshanda. Zvandinoita?
Pindura kuna Norma González
Hei, kutonga kwangu kwaive kwakaipa kwemwedzi uye ndanga ndaenda kuchitoro vakandiudza kuti ndinofanira kuchinja kutonga, uye nhasi ndaona peji rako uye ndanga ndichikwanisa kuzviita ndisina kana kutenga imwe control ... waita hako! zvakanyanya kubatsira
Hector Quezada akadaro
Zvinoita here kuchenesa macontinu ealuminium control yeApple TV ????
Pindura Hector Quezada
Iwe wakakora, iwe unoziva
Pindura kuna Pop
Mhoroi, maita basa kwazvo, kuraira kwenyu kwakandibatsira zvakanyanya
Isu tinopinda mufekitori yeApple muIreland
XCOM: Muvengi Kusaziva 2 yeMac munaNovember